FITRANDRAHANA ANY VATOVAVY FITOVINANY : Manome dimy andro hialan’ny Sinoa ny mponina
Mpikarama an’ady no fiheveran’ny olona an’ireo mpanao gazety sasany nisolantsolana nihaona tamin’ny Filoham-pirenena teny Iavoloha ary azo heverina fa izany no nanimba ny tolona ho an’ny fahalalahana. 26 août 2016
Miteraka olana anefa izany satria ankoatra ny fahapotehan’ny tontolo iainana dia simba ihany koa ny seha-piharian’ny mponina.
Ekana fa tsara ny fahatongavan’ny mpandraharaha eto amintsika saingy raha amin’ny alalan’ny terisetra sy famitahana no ahafahan’izy ireo miditra eto amintsika dia korontana hatrany no vokany.
Manome 5 andro ny Sinoa mpitrandraka volamena ao an-tanànany ny vahoakan’ i Vohilava, Kaominina miala 60km an’i Mananjary Vatovavy Fitovinany, hanalan’ny Sinoa ny fitaovana fitrandrahana volamena ao an-toerana. Voalazan’ny Ben’ny tanàna sy ny Raiamandreny maro ao Vohilava fa ireto Sinoa ireto dia avy dia nitrandraka volamena tao an-toerana fa tsy nandalo tamin’ny Kaominina akory no tsy nampiseho taratasy fahazoan-dalana hitrandraka volamena.
Miasa andro aman’alina ny milina fitrandrahana, ka ny tanimbary sy ny renirano fantsakan’olona no fidiovana araka ny fomban-tany any no handiovany ny volamena, ka maloto noho ny fampiasana merkiora ny rano. Atahorana hiteraka aretina mihitsy aza izany. Ireto Sinoa dia milaza tsy mahay miteny gasy ary tsy maka mpandika teny akory anefa izy ireo. Nilaza ny ben’ny tanàna fa efa imbetsaka no nitaraina tany amin’ny Distrika ny tenany momba ny fanapotehana ny tontolo iainana nataon’ireto Sinoa ireto fa tsy mihetsika ny Distrika.
Izany indrindra no antony nanomezan’ny mponin’i Vohilava 5 andro ny Sinoa hanalàny ireo milina fitrandrahany volamena fa raha tsy izany dia ny fokonolona no handray an-tanana amin’nyraharaha ary hanala izany avy hatrany.
Tsy mazava ny nahazoan’ny Sinoa alalana hitrandraka
Miantso ny zanaka malagasy rehetra ny zanak’i Vatovavy Fitovinany hanohana ny fanesorana ireto Sinoa ireto. Mampametra-panontaniana kosa hoe iza no nanao sonia nanome alalana ny fitrandrahana volamena tsy manarapenitra toa izao ? Iza no nanao sonia ny fampidirana ny milina fitrandrahana volamena toa itony. Ny soson-kevitry ny fokonolona any an-toerana dia tokony hatsangana ny Dinam-pokonolona eny ifotony momba ny tsy mety ataon’ny teratany vahiny raha toa tsy misy fandraisana andraikitra ataon’ny Fanjakana mahefa. Satria maro loatra ny vahiny ratsy saina no tafiditra eto Madagasikara.